Budata Baidu Antivirus maka Windows
Budata Baidu Antivirus
Free Budata maka Windows (23.39 MB)
Budata Baidu Antivirus,
Baidu Antivirus bụ sọftụwia antivirus na -aga nke ọma na -eji ngọzi nke teknụzụ ịgbakọ igwe ojii. Nihi kọmpụta igwe ojii, mmemme ahụ nwere ike meghachi omume ozugbo enwere ike megide nje ọhụrụ emepụtara na kuki nje na -enweta na ịntanetị.
Ihe mmemme a na -enyekwa gị ohere ịgbanwe netiti modulu nyocha nje dị iche iche. Ya mere, nje nke na -enweghị ike ịmata otu modulu, nke ọzọ nwere ike chọpụta ya. Injin ndị ọzọ dị ka injin Identification Nje Virus bụ ihe na -ewusi mmemme a ike.
Mmemme antivirus a na -akwụghị ụgwọ pere mpe pere mpe ma na -emepụta ibu sistemụ dị ntakịrị.
Baidu Antivirus Ụdịdị
Nha faịlụ: 23.39 MB
Mmepụta: Baidu, Inc